Rosia: Nisy namono ny nahazo ny lokan’ny politkovskaya · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Jolay 2009 22:58 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 日本語, Nederlands, Español, Italiano, বাংলা, Português, English
Mpiaro ny zon'olombelona malaza iray Natalya Estemirova indray androany maraina no nalain'olona mitam-piadiana an-keriny tao an-tranony tany Ingushetia. Ny fatiny sisa no hita avy eo ary nisy bala ny fony. Raha zara fa nitatitra ny fahafatesana mpikatroka iray indray ny gazety mahazatra – eny fa na dia famonoana ny mpiaro ny zon'olombelona fanta-daza indrindra aza izany – dia nilaza ny rikorikony kosa ny mpamaham-bolongana sasany.
Estemirova sy Kovalev fony nandray ny medaily Robert Schuman
Eny ary, iza moa i Natalya Estemirova? mpampiasa LJ xanzhar no manolotra [RUS] fohifohy ity fanta-bahoaka ity:
Iray tamin'ireo nisolo tena ny fikambanana Rosiana miaro ny Zon'olombelona Memorial any Kaokazy i Natalya Estemirova. Tsy mbola nampiseho tsy-fahafaliana tamin'ny asany na oviana na oviana ny manam-pahefana any amin'ny Repoblikan'i Chechnya. Nahazoany fankasitrahana iraisam-pirenena maro ny fiarovana ny zon'olombelona nataon'i Estemirova. Izy no nahazo voalohany indrindra ny Loka Anna Politkovskaya (2007), ary efa nahazo ny loka Soedoà [—] Ny zo hiaina (Right Livelihood Award) (tamin'ny taona 2004). Tamin'ny 2005, no nanoloran'ny Antenimiera Eoropeana azy ny Medaily Robert Schumann.
Ny mpampiasa LJ nansysnspb no namboraka [RUS] ny fahatsapany momba ity vono olona ity:
Akaiky loatra, mampihoron-koditra… [—] Mahafantatra olona naman'i Natalya Estemirova aho… Dia nandatsak'aina izy ireo. Tahaka ny mamaky ny tantara Strugatsky [tantara nofinofy]… Iza koa ny manaraka? Mandrehitra labozia… Manozona ny mpamono olona, di amanoratra taratasy any amin'ny mpampanoa lalàna miantso fanadihadiana lalina hanamelohana ny mpamono olona – izay mety mitondra grady ary manana andraikitra mifandraika amin'ny sehatry ny fiarovana.
Manohy izany eritreritra izany koa ny mpampiasa LJ for efel [RUS]:
Azo antoka fa manana fifandraisana amin'ny filoha Chechen Kadyrov [ny mpamono olona]. Tsy fantatra mazava aloha hoe amin'ny fomba ahoana. Te-haka sitraka sa hanala baraka azy, tahaka ny namoanoana an'i Politkovskaya. Misy ifandraisany (araka ny fijeriko azy) amin'ny nanesorana ny sisintany manavaka an'i Chechnya sy i Ingushetia hiarovany ny sonderkomand [vondrona manokana]… [—] ny zava-marina dia manandanja kokoa noho i Anna Politkovskaya aza i Natasha [Estemirova]. Amin'ny ankapobeny dia samy afaka managana tsangambato ahatsiarovana ireo mpiaro ny zon'olombelona tsirairay any Kaokazy avokoa ny rehetra. Enga anie mba tsy ho diso fandraisana azy fotsiny ny mpamono olona: Izany hoe tsangambato ho an'ny velona [no naorina]!
Fahafatesana hafa indray – mamerina hiram-paty hafa indray. Misy mahasamihafa azy ve? Fanontaniana ho an'ny tsirairay hosaintsaininy. Fa raha tombana-maso kosa ny fihetsiky ny mpamaham-bolongana dia tena niavaka tokoa i Natalya Estemirova ho an'ireo olona maro ianjadian'ny herisetra sy horohoro mandritra ny andavanandrom-piainana Rosiana any amin'ny Rapoblikan'i Chechnya rotiky ny ady.